Home News Faahfaahin Qarraxii Maanta ka dhacay Jidka Maka Al Mukarrama
Faahfaahin Qarraxii Maanta ka dhacay Jidka Maka Al Mukarrama
Faahfaahin dheeraad ah o ka soo baxday qarraxii saaka ayaa waxay sheegeysaa in lagu xeray gaari uu leeyahay Nin la yiraahdo Sharmarke oo ka shaqeeyey Garoonka dayuuradaha ee Muqdisho qeybta Fiisooyinka. Qaraxu waxaa uu ka dhacay wadadda Maka Al-Mukarama waxaa lala beegsaday Sharmarke oo ka tirsanaa Hey’adda NISA. Allah mahaddii waxba kuma gaarin waayo markii uu gaariga u kici waayey ayuu eegay gariga hoostiisa waxaanu arkay baako ku dhegan gariga calooshiisa waanu ka cararyey. Kadiban waxaa qarxay gaarigii, Mana jirto cid kale oo la ogyahay oo wax ku noqotay.
Waxaa faraha ka si baxaya ammaanka Magaalada Muqdisho, waxaana saacad saacd loogu weraraa shakhsiyaadkan qaranka u shaqeeya iyo kuwa dadka u shaqeeya. Waxaa saaka si naxariisdarro ah loogu dilay nin ka mid ah dhallinyarada ugu wanaagsan xagga hal abuurka ganacsiga Maxamed Sheekh Cali oo madax ka ahaa Start up Grind.
Waxaa uu dalku u muuqdaa inuu gaarayo meel aan laga soo celin Karin, mana aha in la iska daawado. Waa in mucaaridku kacaan, waa haddii uu mucaarid jiraa illeyn waa lakala gataye, gudoomiyaha barlamankana uu isugu yeero Balamanka oo ay arrimaha dalka iska wareystaan haddii kale shacbiga waa inay wax ka qabtaan burburka dalka ku socdo oo dawladda iyo Barlamanka labadaba la xisaabtamaan.
Previous articleDEG DEG:Qarax Xoogan Oo Laga Maqlay Magaalada Muqdisho
Next articleMadaxweyne Ismaciil Cumar Geelle (ICG) iyo MW Maxamed Cabdullahi Farmajo (MCF) oo Telefoon ku wada Hadlay Booqashadii Farmajo ee Erateriya Kadib.
Diblomaasiyiinta Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho oo dhiig ku deeqay (Sawirro)
Kheeyre Arrimaha Ciidanka Maxuu ka Yiri”Mushaarka iyo Shaqada aad qabaneeysaan ma...